What can I do to protect my child from getting or passing on COVID-19 at school: Yikuphi okufanele kwenziwe ukuvikela ingane yami ekutholeni noma ekudluliseni i-covid-19 esikoleni? – Messages for Mothers
What can I do to protect my child from getting or passing on COVID-19 at school: Yikuphi okufanele kwenziwe ukuvikela ingane yami ekutholeni noma ekudluliseni i-covid-19 esikoleni?
Tshela ingane yakho ukuthi izinakekele ngalendlela
Uma ingaphezu kweminyaka emibili, futhi uma ikwazi, ifake isifihla-buso sendwangu esemboza ikhala layo nomlomo
Ukuqhelelana kwezenhlalo – igcine okungenani imitha elilodwa kuya kwamabili ukusuka kwabanye
Ingathintani nabanye! Igweme ukwangana kanye nokushayana izandla
Igeze noma ihlanze izandla kaningi: lapho ifika esikoleni, ngaphambili nangemuva kokudla noma ukuya endlini encane, futhi uma ithinta umuntu ngephutha. Izame ukungathinti ubuso bayo noma isifihla-buso
Ingahlanganyeli izinkomishi, izitsha, izinto zokubhala noma amabhodlela nabanye.
Ikhwehlelele noma ithimulele endololwaneni noma ethishwini. Iphonse ithishu elisetshenzisiwe emgqonyeni.
Ilandele imithetho yesikole yokuthi ingangena futhi iphume nini esikoleni.
Uma ingane yakho (noma othile ekhaya), engaphilile, akumele iye esikoleni.
← Should My Child Go Back to School: Ingabe ingane yami ingaphindela esikoleni? → What does my child need to know about masks: Yikuphi ingane yami okumele ikwaze ngezifihla-buso?